Ebee ka eji akụkụ plastik
Post oge: 10-16-2020
A na-eme akụkụ plastik site na ịkpụzi ebu na usoro nhazi ndị ọzọ, nke nha na ọrụ na-ezute ihe ndị chọrọ. Enwere ihe karịrị 80% nke akụkụ plastik site na ịkpụzi ọgwụ, nke bụ ụzọ bụ isi iji nweta akụkụ plastik ziri ezi. Igba ...GỤKWUO »
10 ụdị plastic resin na ngwa
Iji mee nke ọma na imepụta na imepụta ngwaahịa plastik, anyị ga-aghọta ụdị na ojiji nke plastik. Plastic bụ ụdị nnukwu ngwakọta ngwongwo (macrolecules) nke polymerized site na mgbakwunye polymerization ma ọ bụ mmeghachi omume polycondensation na monomer dị ka akụrụngwa. Enwere ọtụtụ ndị ikwu ...GỤKWUO »
Gịnị bụ plastic ọgwụ igbe
Post oge: 10-15-2020
Plastic Medical igbe (na-akpọ ọgwụ na igbe) ma ọ bụ plastic ọgwụ igbe, na-eji ọtụtụ n'ụlọ ọgwụ na ezinụlọ. Enwere ike iji ya maka ịchekwa ọgwụ, ngwaọrụ ahụike ma ọ bụ buru ha maka ịhụ ndị ọrịa. Igbe ọgwụ, dị ka aha ya pụtara, bụ akpa maka ịchekwa mgbasa ...GỤKWUO »
Site na mmepe nke ụlọ ọrụ nke oge a, e nwere ọtụtụ ihe plastic dị mma. N'otu oge ahụ, a na-ejikwa ngwaahịa plastik eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche. Karịsịa, a na-eji akụkụ plastik ziri ezi karị. Ugbu a, ka anyị kerịta gị ndụmọdụ maka akụkụ plastik ziri ezi ...GỤKWUO »
Olee otú ịhọrọ gị injection ebu emeputa
Ọgwụ ebu bụ ụdị ngwá ọrụ maka akpụ plastic ma ọ bụ ngwaike akụkụ. Ọdịdị nke ọgwụ nkedo dị nkenke ma dị mgbagwoju anya, ọ ga-enwerịrị ndụ ọrụ dị elu nke ọtụtụ narị puku puku usoro ịgba ọgwụ. Ọ bụ ụdị nke nnukwu uru akụrụngwa, na ya àgwà arụ a ...GỤKWUO »